ကိုယျရခဲ့တဲ့ ဒဏျရာတှကေိုရတှေကျရငျးနဲ့ ကိုယျ့အခြိနျတှကေို …မဖွုနျးပဈလိုကျနဲ့ – Shinyoon
လူတဈယောကျကွောငျ့ ကိုယျ့မှာ နာနာကငျြကငျြ ခံစားနရေတဲ့အခါ အဲ့ဒီဒဏျရာတှကေို ရတှေကျရငျးနဲ့ပဲ အခြိနျတှေ ကုနျမနနေဲ့ မဖွဈနိုငျမှနျးသိရငျ သတ်တိရှိရှိနဲ့ လှတျခရြဲရတယျ ။သူမရှိရငျ မဖွဈပါဘူးဆိုတဲ့ အတှေးက ခုခြိနျမှာပဲ စှဲနတောပါ သလေူလို့သာ သတျမှတျပွီး ဘ၀ထဲက ထုတျလိုကျ သသေောသူ ကွာရငျ မသှေ့ားလိမျ့မယျ ။
ဘ၀…က တကယျ့ကို တိုတိုလေးပါ … တဈနှဈ တဈနှဈဆိုတဲ့အခြိနျတှကေ မကျြစိတဈမှိတျအတှငျး ပွီးသှားတတျတာမြိုးပဲလေ …မသိရငျ မနတေ့ဈနကေ့လိုပဲ ။ ဒီလိုတိုတဲ့ ဘ၀မှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ နပြေျောအောငျနဖေို့လိုတယျ ။ နပြေျောအောငျနဖေို့ဆိုရငျ မလိုတဲ့အရာတှကေို ခေါငျးထဲမထညျ့ပဲ နတေတျဖို့လိုတယျ ။
လူတဈယောကျကွောငျ့ နာကငျြနရေတဲ့အခါ ကြှနျမတို့ ကွာကွာနာကငျြနလေို့ မဖွဈဘူး … ဘ၀မှာပြျောဖို့ အခြိနျတှအေမြားကွီးဆုံးရှုံးသှားလိမျ့မယျ ကြှနျမတို့ အရှုံးဆုံးခံလို့ မဖွဈဘူးလေ ။ ပြျောအောငျနတေတျဖို့ဆိုတာထကျ ကိုယျ့ဘ၀နဲ့ကိုယျ ပြျောနဖေို့လိုပါတယျ ။
တဈယောကျယောကျက ဒဏျရာတှပေေးတဲ့အခါ သငျခနျးစာလေးယူပွီး … ဒဏျရာတှကေို မွနျမွနျဆနျဆနျလေး ကုစားလိုကျတာ ပိုကောငျးပါတယျ ။ နာကငျြနပေါပွီလို့အျောပွီး တောငျးပနျနရေုံ ခေါငျးငုံ့နရေုံနဲ့ မစာနာတဲ့သူက ပွနျပွီးစာနာလာမှာမဟုတျသလို မကွငျနာတဲ့သူက ပွနျပွီး ကွငျနာလာမှာမဟုတျဘူး ။ အဲ့လိုလုပျနတောဟာ ကိုယျ့တနျဖိုးကို ကိုယျကိုယျတိုငျခလြိုကျတာနဲ့ပဲတူပါတယျ ။
အမုနျးတှလေဲ ထုတျထုတျမသုံးနဲ့ လူတဈယောကျကို မုနျးနရေခွငျးက ကိုယျကိုယျတိုငျ အရငျဆုံးပူလောငျရတယျ ။ အပူလောငျမခံနဲ့ . ကိုယျ့အတှေးနဲ့ကိုယျ ပူလောငျရတာက အနာကငျြရဆုံးပဲ ။ တဈခါတဈလကေတြော့ ဘာကိုမှ မတှေးပဲ နလေို့ရရငျနပေါ ။ နလေို့မရတဲ့အခွအေနရှေိနတေဲ့အခါ မမွငျခငျြယောငျဆောငျပွီးပဲဖွဈဖွဈ တဈဖကျလှညျ့ပွီးပဲ ဖွဈဖွဈ နတေတျသလိုလေး နလေိုကျတာ အကောငျးဆုံးပဲ ။
ဘယျတော့မှ …ကိုယျရခဲ့တဲ့ ဒဏျရာတှကေိုရတှေကျရငျးနဲ့ ကိုယျ့အခြိနျတှကေို …မဖွုနျးပဈလိုကျနဲ့ … ကိုယျ့ဘ၀မှာ အရေးမပါမှနျးသိရငျ … ကိုယျ့ဘကျက လှတျခရြဲတဲ့ သတ်တိလေးလိုတယျ ။
လူတစ်ယောက်ကြောင့် ကိုယ့်မှာ နာနာကျင်ကျင် ခံစားနေရတဲ့အခါ အဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေကို ရေတွက်ရင်းနဲ့ပဲ အချိန်တွေ ကုန်မနေနဲ့ မဖြစ်နိုင်မှန်းသိရင် သတ္တိရှိရှိနဲ့ လွှတ်ချရဲရတယ် ။သူမရှိရင် မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ အတွေးက ခုချိန်မှာပဲ စွဲနေတာပါ သေလူလို့သာ သတ်မှတ်ပြီး ဘ၀ထဲက ထုတ်လိုက် သေသောသူ ကြာရင် မေ့သွားလိမ့်မယ် ။
ဘ၀…က တကယ့်ကို တိုတိုလေးပါ … တစ်နှစ် တစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေက မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်း ပြီးသွားတတ်တာမျိုးပဲလေ …မသိရင် မနေ့တစ်နေ့ကလိုပဲ ။ ဒီလိုတိုတဲ့ ဘ၀မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နေပျော်အောင်နေဖို့လိုတယ် ။ နေပျော်အောင်နေဖို့ဆိုရင် မလိုတဲ့အရာတွေကို ခေါင်းထဲမထည့်ပဲ နေတတ်ဖို့လိုတယ် ။
လူတစ်ယောက်ကြောင့် နာကျင်နေရတဲ့အခါ ကျွန်မတို့ ကြာကြာနာကျင်နေလို့ မဖြစ်ဘူး … ဘ၀မှာပျော်ဖို့ အချိန်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ် ကျွန်မတို့ အရှုံးဆုံးခံလို့ မဖြစ်ဘူးလေ ။ ပျော်အောင်နေတတ်ဖို့ဆိုတာထက် ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ် ပျော်နေဖို့လိုပါတယ် ။
တစ်ယောက်ယောက်က ဒဏ်ရာတွေပေးတဲ့အခါ သင်ခန်းစာလေးယူပြီး … ဒဏ်ရာတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေး ကုစားလိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ် ။ နာကျင်နေပါပြီလို့အော်ပြီး တောင်းပန်နေရုံ ခေါင်းငုံ့နေရုံနဲ့ မစာနာတဲ့သူက ပြန်ပြီးစာနာလာမှာမဟုတ်သလို မကြင်နာတဲ့သူက ပြန်ပြီး ကြင်နာလာမှာမဟုတ်ဘူး ။ အဲ့လိုလုပ်နေတာဟာ ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ချလိုက်တာနဲ့ပဲတူပါတယ် ။
အမုန်းတွေလဲ ထုတ်ထုတ်မသုံးနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မုန်းနေရခြင်းက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အရင်ဆုံးပူလောင်ရတယ် ။ အပူလောင်မခံနဲ့ . ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ပူလောင်ရတာက အနာကျင်ရဆုံးပဲ ။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ဘာကိုမှ မတွေးပဲ နေလို့ရရင်နေပါ ။ နေလို့မရတဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့အခါ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဖက်လှည့်ပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် နေတတ်သလိုလေး နေလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပဲ ။
ဘယ်တော့မှ …ကိုယ်ရခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာတွေကိုရေတွက်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်အချိန်တွေကို …မဖြုန်းပစ်လိုက်နဲ့ … ကိုယ့်ဘ၀မှာ အရေးမပါမှန်းသိရင် … ကိုယ့်ဘက်က လွှတ်ချရဲတဲ့ သတ္တိလေးလိုတယ် ။